औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घट्यो, निर्यात बढ्यो - NepalKhoj
औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात घट्यो, निर्यात बढ्यो
नेपालखोज २०७६ मंसिर १५ गते ९:४४
१५ मंसिर, काठमाडौं । पछिल्ला वर्षमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निर्माण क्षेत्रमा शिथिलता आउँदा प्रमुख औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात खुम्चिन पुगेको छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्यांकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ४ महीनामा स्टील तथा फलाम र कोइलाको आयात ह्वात्तै घटेको छ । पछिल्लो समय स्टील, छड र सिमेन्टको बजार अपेक्षाकृत विस्तार नहुँदा त्यसको असर यी वस्तुको उत्पादनमा परेको यी वस्तुको कच्चा पदार्थमा आयातमा आएको कमीले देखाउँछ । पहिलो ४ महीनामा स्टील तथा फलामको आयात ३३ प्रतिशत र कोइलाको आयात ३७ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ ।
स्टील उद्यमीहरू बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको तर माग स्थिर रहँदा स्टीलको बजार समग्र प्रभावित हुनपुगेको बताउँछन् । पञ्चकन्या स्टीलका वरिष्ठ उत्पादन अधिकृत मिलन थापाले बजारमा स्टील र फलामको माग ४० प्रतिशतले घट्दा कच्चा पदार्थको आयात पनि घटेको बताए ।
निर्यात दोहोरो अंकमा बढ्दा तथा आयात करीब ७ प्रतिशतले घट्दा मुलुकको समग्र व्यापारघाटा करीब ९ प्रतिशतले कम भएको छ । पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा समग्र निर्यात बढे पनि त्यसबाट खुशी भइहाल्न पर्ने अवस्था नआएको बताउँछन् । यस अवधिमा नेपालबाट रू. ८ अर्ब ३६ करोडको पाम आयल, रू. २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको धागो, रू. २ अर्ब ६२ करोडका गलैंचा र कार्पेट, रू. २ अर्ब १६ करोडका तयारी कपडा र रू. २ अर्ब २ करोडको प्रशोधित भटमासको निर्यात भएको छ ।